အောကျတိုဘာ 17, 2018 – Healthy Life Journal
ဆီးချိုရောဂါနှင့် အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ (၂) (Diabetes Mellitus and NAFLD/NASH)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) အသည်းအဆီဖုံးတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ အာထရာဆောင်း (Ultrasound) ခေါ် တယ်လီဗီးရှင်းဓာတ်မှန် ၊ စီတီ CT ခေါ်ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်၊ အမ်အာအိုင် MRI ခေါ် သံလိုက်ဓာတ်မှန်တွေကိုသုံးပြီး အသည်းမှာ အဆီဖုံးတာရှိ၊ မရှိ ရောဂါရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အသည်းရောင်ရင်တော့...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း မေး. မျက်ခမ်းရောင်ရမ်းခြင်း (Blepharitis) ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. မျက်ခမ်းရောင်တယ်ဆိုတော့ အရင်ဆုံး မျက်ခမ်းရဲ့ခန္ဓာဗေဒတည်ဆောက်မှု (Anatomy) ကို သိဖို့လိုပါတယ်။ မျက်ခမ်းမှာ အဓိကအားဖြင့် မျက်တောင်ရှိတယ်။ ပြီးရင် Tasal Glands တွေရှိတယ်။...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းအသင့် အတင့် လုပ်ဆောင်ပေးရပါမယ်။ အချိန်များများမပေးနိုင်ရင် မနက်စာစားပြီး ၁၀ မိနစ်၊ နေ့လယ်စာစားပြီး ၁၀ မိနစ်နဲ့ ညစာစားပြီး ၁၀ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆိုဒီယမ်ပါတဲ့ ဆားကို...
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေချိန်မှာ ရေချိုးလိုက်ပါ . . .
၊ လရိပ်မေ ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေချိန်မှာ ရေစိမ်ကန်ထဲ စိမ်ချိုးတာက ပင်ပန်းမှုပြေလျော့ပြီး စိတ်ကို လန်းဆန်းသွားစေပါတယ်။ ချိုးရေထဲ ရေချိုးပေါင်ဒါမှုန့် ဒါမှမဟုတ် ရေချိုးဆီထည့်ပေးတာက စိတ်နဲ့ခန္ဓာကို အနားရစေပါတယ်။ ဆေးပညာကု ထုံးဂျာနယ်ရဲ့ လေ့လာမှုအရ စိတ်ပူပင်သောက များနေသူတွေအတွက် နေ့စဉ် ကြက်သီးနွေးရေထဲစိမ်ပြီးချိုးတာ...